सार्वजनिक यातायात ब्यवसायीले भने, अब हामी पनि गाडी चलाउँछौं!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/सार्वजनिक यातायात ब्यवसायीले भने, अब हामी पनि गाडी चलाउँछौं!!
काठमाडौं । काठमाडौंमा केही दिन यता पसल ब्यवसाय चल्न थालेका छन् । सडकमा सवारी साधनको संख्या पनि बाक्लो देखिएको छ । लामो समय देखि आजित परेका पसले र ब्यवसायीले पसल ब्यवसाय सञ्चाल गर्न थालेका हुन् । पसल ब्यवसाय सञ्चा लन हुन थालेपछि यातायात व्यवसायीहरुले आफुहरुले पनि सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
यातायाता व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सार्वजनिक यातायात खोल्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । आफुहरुको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै अब सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताएका छन् । यातायात मजदुर र ब्यवसायी भोकै हुने बेला भइसकेको उनको भनाई छ । सार्वजनिक यातायातमा १० खर्बको लगानी रहेको र १० लाख भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । स्वास्थ्य सुरक्षाको माप`दण्ड अप`नाएर आफु`हरु यातायात सञ्चा`लन गर्ने मन`स्थितिमा पुगेको उनको भनाई छ ।